ओलीलाई नै थाहा नदिई प्रचण्डले बोलाए आफु निकट नेतालाई खुमलटार, सबैलाई चकित पार्दै भयो यस्तो सहमति — Sanchar Kendra
ओलीलाई नै थाहा नदिई प्रचण्डले बोलाए आफु निकट नेतालाई खुमलटार, सबैलाई चकित पार्दै भयो यस्तो सहमति
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकप)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफु निकट स्थायी समिति सदस्यसँग छलफल गरेका छन् ।आइतबार बिहान आफु निकट नेताहरुलाई खुमलटार निवास बोलाएर पार्टीले प्रकाशित गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनबारे छलफल गरेका हुन् ।
सहमती विपरित पूर्व एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक प्रतिवेदनमा बहुदलिय जनवाद हुने भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि दुबै पार्टी वीच अविश्वास सृजना भएको थियो ।
नेकपा नेता अग्नी सापकोटाको अनुसार शनिबार भएको सचिवालय बैठकको ब्रिफिङ र राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्नेबारे अध्यक्षले जानकारी दिएको बताए । ‘राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्ने सहमती जुटिसकेको छ,’ नेता सापकोटाले भने, ‘सहमती अनुसार नै सम्पादन गरेर प्रकाशित गर्ने अध्यक्षबाट जानकारी पायौं ।’
त्यस्तै यतिबेला सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सांसद आफूआफूमै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमै सांसदहरुले एकअर्काप्रति व्यक्त विचारको विषयमा जुहारी नै चलेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद उमाकान्त चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘झुटप्रसाद ओली’ भनेपछि चौधरीको अभिव्यक्तिको विषयमा नेकपा सांसदले आपत्ति जनाए ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका चौधरीले प्रधानमन्त्रीलाई झूटप्रसाद ओली भनेका थिए । उनले भनेका थिए ‘सरकारको गठनदेखि आजसम्म जनताले प्रशंसा गर्न लायक काम सरकारले गर्न सकेको छैन, यो सरकार काण्डैकाण्डको दलदलमा फसेको छ ।
शुरूमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने मुद्दामा वाहवाही पाएको सरकारले सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गरेर आफूलाई झूट साबित गरेको छ, जथाभावी कर निर्धारण गरेर करप्रसाद उपनाम पाएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकारको कामकारवाही हेर्दा उहाँले सधैं झुटको आश्वासन दिने, झूटको खेती गर्ने गर्दा उहाँको उपनाम झुटप्रसाद ओली भन्दा केही फरक पर्नेवाला छैन ।’
चौधरीको यो अभिव्यति प्रति आपत्ति जनाउँदै सभामुखसँग समय लिएर नेकपाका सांसद झपट रावलले कांग्रेस सभापति नाम बिगारे के होला भन्दै प्रश्न गरे । रावलले भने ‘प्रतिपक्षी दलका माननीय सदस्यले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नाम बिगारेर सम्बोधन गर्नुभएको छ ।
हामीले बोल्ने भाषा शैलीबारे नेपाली जनताले चनाखो ढंगले हेर्नुभएको छ । हामीले बोल्ने भाषा सभ्य र सुसंस्कृत हुनुपर्छ । हामी यहाँ बोलिरहँदा नेपाली जनताले के सिक्ने ? प्रतिपक्षी दलका मानननीयजीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नाम बंग्याएर करप्रसाद लगायतका झूटप्रसाद ओली भन्नुभएको छ । हामीले पनि प्रतिपक्षी दलका नेताज्यू शेरबहादुर देउवाको नाम छेरबहादुर देउवा भन्न बाध्य भयौं भने के हुन्छ ?’
नेकपा सांसद रावलले चौधरीले बोलेको विषयलाई नेकपा सांसद रावलले गरेको टिप्पणीले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले अब के गर्ने भन्ने निर्णय लिने बताए ।
सरकार र नेकपाविरुद्ध कांग्रेसले चलाएको ‘ज्वाँई’ हल्ला ?
गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको केही दिनमा उपत्यकामा गुठीयारहरूले विधेयक खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । उक्त प्रदर्शन सरकारविरुद्ध थियो, जसमा मिसियो प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा हालका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले राजतन्त्रकालमा सदनमा पेश गरेको विधेयक नै सरकारले ल्याएको दाबी सत्तापक्षको थियो । देउवाको उक्त विधेयक १८ असोज, २०६० मा त्यसबेला प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारण प्रस्तुत हुन नसकेको दाबी गरिएको छ । तर, सोही विधयेकविरुद्धको आन्दोलनमा कांग्रेसले जोडेर नातावादी विरोधको हल्ला पिट्यो – गुठीयारले भने, ज्वाँईहरू बेइमान परेछन् ।
गुठी विधेयकका विषयमा टिप्पणी गर्दै उपत्यकाका नेवार समुदायले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘ज्वाँई त बेइमान रहेछ’ भनेको चर्चा कांग्रेस सांसद गगन थापाले गरेका थिए । तर, गुठी विधेयकविरुद्धको अभियानमा लागेका कुनै पनि गुठीयारले उक्त शव्दको प्रयोग गरेका थिएनन् । न त माइतीघर मण्डलामा भएको विशाल सभामा उक्त भाषाको प्रयोग भयो । तर थापाले बसन्तपुरमा भएको गुठी विधेयकविरुद्धको एउटा सभामा पनि उक्त शव्दको प्रयोग गरेका थिए ।
राजनीतिक अभियान र संघर्षका दौरान धेरै नेकपाका नेताले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नेवार समुदायका छोरीचेलीसँग बिहे गरेका थिए । तत्कालिन कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठले पनि संघर्षका दौरान जुराईदिएको जोडीको प्रभाव मान्नुको साटो मुद्दा बनाउनुले कांग्रेसले प्रतिपक्षीमा पनि कमजोर भइरहेको सन्देश दिएको गुठी अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
एक गुठीयार भन्छन्,‘हामीले यसलाई सामाजिक मुद्दाका रूपमा उठायौं, पहिचान र संस्कृतिको जगेर्नाका विषयमा उठायौं । प्रधानमन्त्री वा कुनै नेतालाई पारिवारिक हिसाबमा त्यसरी भनेका छैनौं ।’
बरु, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलेचाहिँ संसदको रोष्टममा उभिएर ज्वाँई प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले यो आन्दोलनबाट शिक्षा लिनका लागि सुझाव दिए । सो क्रममा काठमाडौंको नेवार समुदायकी पत्नी हिसिला यमीसँग बिहे गरेको कारण आफूलाई पनि उनले सोही सम्बोधनमा समेटेका थिए ।
गुठी विधेयकविरुद्ध प्रदर्शनको घोषणा गरेको अघिल्लो दिन नै भूमीसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिइन् । जसको संसदीय प्रक्रिया राष्ट्रिय सभामा आइतबार सुरु भएको छ । अझै पनि फिर्ता भन्दा खारेजी हुनुपर्ने गुठीयारको माग छ । शनिबार साँझ मसाल जुलुस गरे पनि सरकारविरुद्ध अन्य नारा र भाषा लगाए पनि गुठीयारले ‘ज्वाँई हल्ला’बारे एक शव्द पनि बोलेका छैनन् ।
अर्का गुठीयार भन्छन्,‘यो सम्पदाको सुरक्षण, परम्परा र संस्कृतिको विषय हो । यो राजनीतिक पनि होइन । त्यसैले हाम्रा सभामा राजनीतिक झन्डा प्रयोग भएका छैनन् । केही राजनीतिक दलले सरकारविरुद्ध बोल्दा पारिवारिक विषयलाई जोडेका छन् ।’
सरकारले भिडलाई नियन्त्रण गर्नका लागि खटाएका सुरक्षाकर्मीलाई फूल बाँड्ने गुठीयारले फूलकै भाषा बोल्ने गरेका थिए । ‘हामीले देशका प्रधानमन्त्रीदेखि सबै नेतालाई मानेका छौं, व्यक्तिगत प्रहार गरेका छैनौं । बरु संस्कृति मासिनु हुन्न भन्ने आवाज मात्र हो, फूल दिने हामीले हरेक चिजमा हेक्का राखेका छौं’, एक अधिकारकर्मीले भने ।
यसै पनि सरकारविरुद्ध बोल्न नेपाली कांग्रेसका लागि बलियो र ठोस मुद्दा केही थिएन । उसले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधनका लागि मागेको समयमा नै बितण्डा मच्चायो, जसका कारण आफ्ना विषय पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रधानमन्त्रीले सुनाएका थिए ।